MOVANSY RAVALOMANANA : MITAKY NY HANEMORANA NY FIFIDIANANA – MyDago.com aime Madagascar
MOVANSY RAVALOMANANA : MITAKY NY HANEMORANA NY FIFIDIANANA
Mitaky ny hanemorana ny fifidianana ny movansy Ravalomanana hoy ny Ct Tsianihy androany teny amin’ny Magro Behoririka. Fantatsika hoy izy fa nisy ny rivodoza Harona izay namotika ny faritra Atsimon’ny Nosy. Ny sekoly, ny biraom-panjakana hoy izy dia mbola tsy voaarina hatramin’izao. No ho izany dia tsy azo ekena ny fifidianana amin’ity taona ity. Manampy trotraka izany ihany koa ny asan-jiolahy eto amintsika. Mila alamina izany hoy izy. Ireo tonga taona feno 18 dia ny operation karapanondro tsy mitombina akory. Mirongatra ihany ko any valala hoy izy , ka hisy olona ho matin’ny mosary eto. Izany rehetra izany hoy Tsianihy no antony tsy azo anaovana fifidianana eto. Ao anatin’ny lalàm-pifidianana ihany koa dia milaza fa tsy azo atao andro fahavaratra ny fifidianana kanefa dia mbola atao ihany. Ny Ct Iandro Roberson dia nilaza fa ny filohan’ny Ceni-T dia nilaza fa ho mafy ny krizy aorian’ny fifidianana satria misy ny valala any Fianarantsoa ka mampijaly ny vahoaka. Tsy izay no izy hoy izy fa ho mafy ny krizy raha atao amboletra ny fifidianana fa ny mety amin’io dia foanana. Ny Ct Hilarion dia nanambara fa raha tsy tonga eto ny filoha Ravalomanana dia tsy misy ny fifidianana ary amin’izay dia manana kandidà isika. Hatramin’izao hoy izy ny biletà tokana dia mbola tsy lasa any Afrika Atsimo fa mbola ao. Misy dikany avokoa izany rehetra izany.
PARLEMANTERA MOVANSY RAVALOMANANA : Tsy hakatoavan’ny rehetra io fifidianana io
Manoela Ralaimapisainarinony : Mpifanandrina tsy azo ialana ny movansy Ravalomanana
MOVANSY RAVALOMANANA : HANOLOTRA KANDIDA HAFA
Auteur Solo Razafy*Publié le 30 août 2013 Catégories Politique
11 pensées sur “MOVANSY RAVALOMANANA : MITAKY NY HANEMORANA NY FIFIDIANANA”
30 août 2013 à 17 h 04 min
Eisy é re olona é! Mahita tenenina foana ianareo .
Maninona ra tsy miteny intsony fa mba miandry ny fanambarana ataon’ny filoha Ravalomanana fa dia mahametra ity izy toa lasa rediredy fotsiny izao hataonareo izao dia tena manala-baraka ny filoha mihintsy!
Ka mbola mitady lalana HIKIRIBIBY ihany hiroso HIALANA HAINGANA @’
DADA SY NENY no dikan’io e!!!MPITARI-BATO VILAM-BAVA.
TSISY RAVALOMANANA na DADA na NENY = TSISY FIFIDIANANA= AMPY IZAY!!!!
30 août 2013 à 18 h 04 min
Dia aza mandrebireby olona fa rehefa tsy atao dia tsy atao , tsy @’izao rivotra hiainana izao
mihintsy no ahafahana HIFIDY ary na 5000 aza hilatsaka eo + an’i Rafavori io = 5001 dia aoka ho
fantry ny maro fa IRAY ihany no hitondra ny fanjakana, koa IZA NO TĖ HAKA NY VATOn’I Ravalomanana mba ahazahoana
io toerana iray io????dia ho SANATRIA ve ho avelantsika ho lasan’ny HAFA ny vaton’i DADA na NENY RAVALOMANANA??
Koa aoka isika tsy ho VOAREBIREBY lava eto fa tsotra e!!
TSISY RAVALOMANANA na NENY na DADA = TSISY FIFIDIANANA
30 août 2013 à 18 h 17 min
Aza manonofy atoandro eo ry zanak’i dada a! Efa vita ny amin’ny tenisany e! Efa nomena possibilité fa niavonavona! Taitra ny olona tsy mba taitra ka taitra irery eo vao mamaky takotra! Ny alika enjehina hoa!
30 août 2013 à 20 h 23 min
TSIA no ho valiny io .
fara faharatsiny ,hanalavana ny TETEZAMITAN’ i rajoelina .
ARY MBA HENOY HOY AO NY FEOM BAHOAKA!!!!
1 septembre 2013 à 6 h 15 min
De mbola ho alavaina ihany izany izao krizy izao???
Kay ianareo mihitsy no tia an’ity fiainana tsy milamina ity ko mody mba blablabla eo!!
1 septembre 2013 à 6 h 19 min
zao sahady de efa manambara ny didy jadona hoe rehefa izao de tsy izao…..
Milaza tsy anontaniana ny mety ho toin’ny fitondrana malagasy sahady raha lany eo Ra8 na Rabofy…
1 septembre 2013 à 8 h 32 min
maivana kou ra-Darih zany an: volom-borona / angidina-miriorio-foana ?!
Nomamoin’ny produit ITI FITIA FITIAVANA foana hatrany
1 septembre 2013 à 11 h 46 min
Au moins dites-moi quelle est le motif de cette non pblication de mes posts ?
3 septembre 2013 à 6 h 20 min
fa mavesatra zany ra-HoAiza??? mba asehoy ary le fahavesarana eh… Toa ohatran maivana ihany no lasa aloha koo… Marina tokoa aloha fa ny yaourt sy ny doberan’nyTIKO no tsara eh… fa rehefa manararao-pahefana de miala eh….
Précédent Article précédent : TSY VERY FANANTENANA NY TOLONA ATAONTSIKA
Suivant Article suivant : Atomboka ato anatiny ny fifamelana sy ny fampihavanana